Labo kamid ah saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dilka gabar 12-sanno jir ahayd oo la toogtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLabo kamid ah saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dilka gabar 12-sanno jir ahayd oo la toogtay
February 11, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dhacaanada DNA oo laga qaaday saddexda nin ayaa cadeeyay in ay dambigaas galeen. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Labo kamid ah saddex nin oo lagu helay in ay kufsadeen oo ay dileen gabar 12-sanno jir ahayd ayaa subaxnimadii hore maanta oo Talaado ah lagu toogtay magaalada Boosaaso, sida uu xaqiijiyay aabaha gabadha dhalay.
Ilyaas Adan oo ah aabaha gabadha yar ee dhiblku gaaray dhalay oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in labo kamid ah nimankaas la toogtay.
Waxa uu intaas ku daray in ninka saddexaad kiiskiisa dib loo dhigay muddo toban beri ah sababo la xiriira baaris dheeri ah ama wadahadal.
Dambiga ka dhanka ah Caasho Ilyaas Aadan ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo bishii Febaraayo ee sanadkii 2019.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa duqeyn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay gudaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM). Labo dagaalyahan ayaa lagu dilay duqeynta oo Khamiistii ka dhacday [...]